पाँच अलग तरिकाहरु को बारे मा Semalt वार्ता को लागि अफलाइन उपयोग को लागि पूरा वेबसाइट डाउनलोड गर्न को लागि
कहिलेकाहीँ हामीले साइटको सामाग्रीमा पहुँच गर्न आवश्यक छ अफलाइन हुँदा. यसको लागि, हामीले यसको फाईलहरू जगेडा गर्नुपर्छ, तर होस्टिङ सेवाहरूको धेरै यो विकल्प प्रदान गर्दैन. हामी लोकप्रिय साइटको ढाँचा अनुकरण गर्न चाहन्छौं र साथै कसरी यसको सीएसएस वा एचटीएमएल फाइलहरू जस्तै देखिन्छ भनेर पत्ता लगाउन सक्दछौं. जुनसुकै अवस्थामा हुन सक्छ, अफलाइन पहुँचको लागि सम्पूर्ण वेबसाइट डाउनलोड गर्न विभिन्न तरिकाहरू छन्. तल सूचीबद्ध उपकरण मध्ये एक प्रयोग गरी, तपाईं विश्वस्ततापूर्वक सम्पूर्ण साइट वा आवश्यक संख्याहरूको पेजहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ. जब पनि तिनीहरू प्रमाणीकरण चाहिन्छ, तपाइँ उनीहरूको निःशुल्क संस्करणहरू रोज्न सक्नुहुन्छ र प्रीमियम योजनाहरूको लागि केहि पनि तिर्न सक्दैनन्. यी उपकरणहरू विशेष रूपमा स्टार्टअप र मध्यम आकारको व्यवसायहरूको लागि उपयुक्त छन्.
HTTrack एक प्रसिद्ध कार्यक्रम वा सफ्टवेयर एक सम्पूर्ण वेबसाइट डाउनलोड गर्न को लागी हो. यसको प्रयोगकर्ता-अनुकूल र आधुनिक इन्फेसले प्रायः प्रयोगकर्ताहरूको कामलाई सुविधा दिन्छ. तपाई भर्खरै साइटको URL सम्मिलित गर्न आवश्यक छ जुन तपाईं स्क्रैप गर्न र अफलाइन पहुँचको लागि डाउनलोड गर्न चाहानुहुन्छ.
तपाईं या त सम्पूर्ण वेबसाइट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईको हार्ड ड्राइवमा स्वचालित रूपमा डाउनलोड गर्नका लागि धेरै पृष्ठहरू हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईंले पनि डाउनलोड गर्नका लागि कति समवर्ती जडानहरू खोल्न चाहानुहुन्छ. यदि एक विशिष्ट फाइल डाउनलोड गर्न धेरै लामो लाग्छ भने, यो प्रक्रिया रद्द गर्न सम्भव छ.
Getleft एक अपेक्षाकृत नयाँ र आधुनिक प्रोग्राम हो जुन धेरै सुविधाहरु र एक प्रयोगकर्ता को अनुकूल इंटरफ़ेस संग. एकपटक डाउनलोड र सुरूवात भएपछि, तपाईंले सुरू गर्न "Ctrl + U" थिच्न सक्नुहुन्छ. एक URL प्रविष्ट गर्नुहोस् र डाइरेक्टरीहरू सुरक्षित गर्नुहोस्. डाउनलोड सुरु गर्नु अघि, Getleft ले तपाईंलाई कसरी सोध्नुहुनेछ कि कति फाइलहरू तपाईं डाउनलोड गर्न चाहानुहुन्छ र चाहे तिनीहरूका पाठहरू र छविहरू समावेश छन्. एक पटक डाउनलोड पूरा भएपछि, हामी सम्पूर्ण वेबसाइट पनि अफलाइन ब्राउज गर्न सक्छौं.
PageNest को सुविधाहरू Getleft र HTTrack को समान छन्. तपाईंले वेबसाइट ठेगाना प्रविष्ट गर्नुपर्छ र यसलाई तपाईको हार्ड ड्राइभमा डाउनलोड गर्नु पर्छ. प्रयोगकर्ताहरूलाई यस्तो आवश्यकताका लागि वेबसाइटको नामको रूपमा सोधिएको छ र यो कहाँ बचत हुन्छ. तपाईं वांछित विकल्पहरू पनि चयन गर्न सक्नुहुन्छ र यसको सेटिङ्हरू समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ.
Cyotek WebCopy संग, तपाईंलाई प्रमाणीकरणको लागि पूर्वनिर्धारित पासवर्डहरू प्रयोग गर्न आवश्यक छ।. तपाईं यो नवीनतम कार्यक्रमसँग नियमहरू पनि सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ र अफलाइन प्रयोगका लागि तुरुन्तै सम्पूर्ण साइट डाउनलोड गर्नुहोस्. डाउनलोड गरिएको साइटको कुल साइज र फाईलहरूको कुल संख्या तपाईंको डेस्कटपको दायाँ कुनामा देखाइएको छ.
5. विकिपीडिया डम्प्स
विकिपीडियाले हामीलाई साधारण उपकरण जस्तै आयोत प्रयोग गर्न सल्लाह दिदैन. io र Kimono ल्याब्स अफलाइन प्रयोगका लागि डाउनलोड डेटा प्राप्त गर्न. यसको सट्टा, यो सँधै विकिपीडिया डम्प्स को सिफारिश गर्दछ किनकि यो कार्यक्रमले गुणवत्ता परिणाम सुनिश्चित गर्दछ. तपाईं सम्पूर्ण वेबसाइटलाई XML ढाँचामा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईंको वेबसाइट वा अनलाइन व्यापारको लागि फायदेमंद डेटा निकाल्दै Source .